दु:ख सम्झेर गाँउको विकास गर्न मन लाग्छ | Citizen Post News
अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रशिक्षक /
यूकेको सगरमाथा तेक्वान्दो डोजाङ फ्यानव्रोमा प्रमुख प्रशिक्षकका रुपमा कार्यरत धिरज गुरुङ तेक्वान्दो खेलमार्फत सामाजिक काममा जुटेका छन् । व्रिटिस सेनाबाट अवकास पाएपछि उनले यूकेमा तेक्वान्दो सिकाउँदै र्दुगम जिल्ला गोर्खाको गाइसुरमा विद्यालय बनाइरहेका छन् । तेक्वान्दो खेलबाट पाँचौ डान हासिल गरेका गुरुङले ५० जना खेलाडीहरुलाई तेक्वान्दो खेलको कला बाँडिरहेका छन् । यूकेमा तेक्वान्दो प्रशिक्षण दिँदै नेपालको सामाजिक काममा नेतृत्व लिएरहेका गुरुङसँग गरिएको कुराकानी:
तेक्वान्दो खेलमार्फत रकम जुटाउँदै नेपालमा सामाजिक काम गरिरहनु भएको छ, किन ?
सर्वप्रथम त, म बेलायतमा बसेता पनि नेपालाी हुँ । मेरो जन्म गाइखुरु गाँउ विकास समिति हाल पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर २, कालामाटा गोर्खा जिल्लामा भएको हो । सामान्य परिवारमा हुर्किएका कारण विभिन्न समस्या र परिस्थितिले सानै उमेरमा लाहुर गए । आफूले सानोमा भोगेको दु:खलाई सम्झेर सकेको सहयोग गाँउ घरको विकासमा गरौं भन्ने मात्र हो । त्यसैले खेलमार्फत सामाजिक काममा होमिएको हुँ ।
कहिलेदेखि तपाईलाई खुलकुदमा रुची भयो त ?
मलाई गाँउमा विराज भनेर चिन्छन् । मेरो गाउँमा पनि सितेरियो कराँतेका स्वर्गीय गुरु कर्णबहादुर रानाले सिकाउनु हुन्थ्यो । उहाँले मार्सल आट्समा चासो राख्ने सवैलाई सिकाउनु हुन्थ्यो । सानो हुँदा पनि मैले सितेरियो कराँतो सिकेको थियो ।
तपाईको तेक्वान्दो खेलको यात्रा चाहिं कहाँबाट सुरु भएको हो ?
सन् १९९० सालमा लाहुरे भर्ति हुन गए । त्यसपछि ‘६ गोर्खा तेक्वान्दो दोजाङ’ मा भर्ना भए । गुरु भक्तबहादुर थापाको प्रशिक्षणमा रेडबेल्टसम्म हासिल गरे । सन् १९९७ पछि सवै गोर्खा पल्टन हङकङ छाडेर तितरवितर हुँदा मेरो तेक्वान्दो गन्तव्य पनि तितरवितर भयो । भनिन्छ नि ‘तँ आट्, म पुर्‍याउँछु’–यस्तै भयो मेरो जीवनमा पनि । सन् १९९८ मा ग्राण्डमास्टर ईन्द्र गुरुङको छनौटमा म फस्ट आरजीआर तेक्वान्दो डोजाङमा भर्ना भए । पल्टने जीवनको व्यस्तताको बाबजुद धेरै प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । प्रतिस्पर्धामा भाग लिने क्रममा हङकङको वीएफटीए, ब्रुनाई, सिंगापुरसम्म पुगेर गोल्ड मेडल हाजिल गरे । उक्त क्षण अझै पनि सम्झने गर्छु । तिनै आठ बर्षको अवधिमा ईन्द्र गुरुको प्रशिक्षणमा सन् १९९८ मा ब्ल्याक बेल्ट हात पाए । त्यसपछि चाहिं मेरो व्यवसायीक तेक्वान्दो गन्तव्य तय भएको हो ।
सेनाबाट अवकाश भएपछि पनि तेक्वान्दो खेललाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ । यो कसरी संभव भइरहेको छ ?
कोसेभोको लडाई, बोसनियाको शान्ति प्रक्रिया, नेपालमा भर्ति केन्द्र वा मेरो आफ्नो व्यस्तताको बाबजुद् तेक्वान्दोलाई निरन्तर दिँदै आए । यसैलाई आधार बनाएर सन् २००६ मा सेनाबाट अवकास प्राप्त गरे । अहिले तेक्वान्दो खेलको पाँचौ डान छु । हामीलाई सेनामा हुँदादेखि नै कसरत गर्ने पानी परेको हुन्छ । त्यसै कारण पनि निरन्तरता दिन सहज भएको हो । मुख्य कुरा त इच्छा हो ।
तपाई अहिले कुन संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ ?
सेनाको अवकास पाएपछि यूकेमा रहेको सगरमाथा तेक्वान्दो डोजाङको मुख्य प्रशिक्षक राष्ट्र राई गुरुसँग सहकार्य गर्दै डोजाङमा आवद्ध भए । एसटीकेडीडी–फ्यानबाराबाट सन् २००८ सालमा पहिलोपटक बेलायतको राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगतीता हाम्रा खेलाडीहरुले दुई रजत, दुई कास्य पदक जिते । त्यसपछि सम्पूर्ण नेपालीहरुको बिचमा खुसियाली छायो । बेलायतको भूमिमा सुमन शिरीस, निकल राना, सिलज गुरुङ र लियो रानाले पदक ल्याएर पहिलोपटक नेपालीहरुको नाम उच्च राखे । हाल म सगरमाथा तेक्वान्दो डोजाङ र जेन मार्सल आट्ससँग आवद्ध भई बेलायतमै तेक्वान्दो प्रशिक्षकको भूमिका निभाइरहेको छु ।
बेलायतमा बसेर खेलमार्फत नेपालमा सामाजिक काम गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी यस्तो योजना बनाउनु भयो ?
हामी नेपालीलाई जहाँ भएपनि आफ्नै घर–गाउँ र देशको माया लाग्छ । मेरो पहिलो पाइला नै म छानो छँदा पढेको विद्यालयमा पर्‍यो । म नेपाल आएको बेला मैले पढेको विद्यालय श्री जनज्योती गए । दयनिय अबस्था देखिपछि मनमा केही गर्ने अठोट भयो । २०३२ सालमा निर्मित उक्त विद्यालयमा कसैको नजर परेको थिएन । तीन बर्ष अगाडि परिवारसँग भेटघाटको क्रममा नेपाल आउँदा फेरी विद्यालयमा जान मन लाग्यो । विद्यालय रोइरहेको थियो । त्यसपछि रोडम्याप बनाउन सुरु गरेको हुँ ।
विद्यालयका तत्कालिन संचालक समितिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर अधिकारी दाईसँग छलफल भयो । उहाँको कुरा सुनेपछि मैले मेरो रोडम्याप प्रस्तुत गरे । बेलायत फर्किनासाथ फेसबुक पेज बनाए । विद्यालय बनाउन आफ्नै घरबाट च्यारिटी सुरु गरे । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सूची संकलन भयो । त्यसपछि सहयोगको आव्हान गरियो । सवैसँग सहयोग पनि लिइयो । हामीले विदाको दिनमा पनि रकम संकलन गर्ने काम गर्‍यौं । कतिपयले त नाम नै माग्न बुढो राखिदिए । कुनै पनि ठाँउमा नचुकौं भन्ने दृष्टिकोणले निर्माण समिति खडा गरी बैंक एकाउण्ट खोलियो । विद्यालयको निर्माण काम अगाडी बढ्यो । जब विद्यालयको काम धमाधम काम भइरहेको थियो, ठूलो चलखेल भएको सुन्नमा आयो । मैले तत्काल नेपालमा फोन गरी कुनै चलखेलको विश्वास नगर्न र निर्माण समितिलाई काम अगाडि बढाउन आग्रह गरे । परिणाम त्यस्तै आयो । उहाँहरुलाई पल्टने भाषामा सलाम भन्न चाहान्छु । बजेट सोचेको भन्दा धेरै लाग्ने भयो । गत बैशाख १२ गते भन्दा ठिक तीन दिनअघि विद्यालय भवनको ढलान गर्‍यौं । र्दुभाग्य, नेपालमा त्यहि बेला महाभूकम्प आयो । चिन्ताले लगत्तै म नेपाल फर्किए । विद्यालय पुगेपछि देखियो कि पुरानो भवनको कक्षाकोठा सवै तहसनहस भएछ । त्यसपछि एक बर्ष काम रोकियो । अहिले विद्यालयका दश जना बालबालिकालाई सम्पूर्ण रुपमा सहयोग गरिरहेको छु । मेरो सामाजिक काम गर्ने योजना नै गाँउ फर्केपछि बनेको हो । विद्यालयको निर्माण कार्य सकिन लागेको छ ।
विद्यालयको भवन निर्माण कार्यमा आर्थिक पारदर्शिता अपनाउनु भएको छ ?
विलकुलै छ । हामीले प्रत्येक खर्चको विवरण सवैले देख्ने गरी फेसबुक पेजमा अपडेट गर्ने गरेका छौं । ‘जनज्योती निम्न माध्यामिक विद्यालय कालामाटा गाइखुर गोर्खा’ पेजमा गएर हेर्न सकिन्छ । मेरो सपना तेक्वान्दो खेलबाट नै गोर्खा जिल्लामा खेलकुदको विकासमा टेवा पुर्‍याउने हो । त्यसैका लागि अहिले पनि दौडिरहेको छु ।
तपाईले नेपालको अन्य कुन कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्नुभएको छ ?
नेपालमा तेक्वान्दो खेललाई विकास गर्ने उदेश्यले निर्मित नेप्लीज तेक्वान्दो एकेडेमी, मुलपानी तेक्वान्दो डोजाङलाई आर्थिक तथा विभिन्न खेलसामाग्री वितरण गरेका छौं । व्यक्तिगत रुपमा र बेलायतमा रहेका नेपाली समूदायसँग समन्वय गरेर सहयोग गरिरहेका छौं । नेपालमा रहेका अन्य डोजाङहरुलाई पनि सकेको खेल सामाग्री सहयोग गर्दै आएका छौं । रक्षा तेक्वान्दो डोजाङ, चितवन तेक्वान्दो र नेपालकै सगरमाथा तेक्वान्दो डोजाङलाई पनि सकेको सहयोग गरेका छौं । र, भविश्यमा पनि नेपालको खेल क्षेत्र विकास गर्न सहयोग गर्ने प्रण गर्छु ।